Ọnụ ụzọ nkedo akpaaka China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ikwupụta Ugboro Abụọ,Ọnụ Ụzọ Ámá Na-emepe Ọnụaka,Ọnụ Ụzọ Ámá Ahịa
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Ọnụ ụzọ nkedo akpaaka
Ihe Nlereanya.: HF-GC67
Ụlọ mpempe akwụkwọ na-agba chaa chaa
Akpanaka Glass Sliding ọnụ ụzọ na-eme mgbanwe maka ihe dị iche iche echichi. Ezubere ya maka ọnọdụ dị oke egwu ma ọ bụ maka ebe ndị dị arọ (Ebe nri nri abalị, ọdụ ụgbọelu, ụlọ ọgwụ, wdg) na ndị na-eto eto na ndị na-ajụ ọrụ (ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ nri, wdg).
(3) Ịdabere: Dụnye obere ụgbọala na-agba ọsọ na-agba ọsọ na obere ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, nke na-enyere ya aka ịmeghe ma mechie ugboro ugboro n'ogologo oge. A na-ejikwa ígwè nke belt na-emepụta ígwè nke na-ezere itinye aka mgbe echichi;
MOTE NDỊ MGBE OBI NA-ECHICHE
Ọnụ Ụzọ Ikwupụta Ugboro Abụọ Ọnụ Ụzọ Ámá Na-emepe Ọnụaka Ọnụ Ụzọ Ámá Ahịa Ọnụ Ụzọ Ụlọ Ahịa ugboro abụọ Ọnụ Ụzọ Ámá Ịgba Mgba abụọ Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na Ntugharị Abụọ Ọnụ Ụzọ Ámá Ịgba Glass Abụọ Ọnụ ụzọ mpịachi oghere dị ọcha